Bariga Dhexe: Heshiis militari oo dhexmaray Qadar iyo Talyaaniga – Kasmo Newspaper
Bariga Dhexe: Heshiis militari oo dhexmaray Qadar iyo Talyaaniga
Updated - August 2, 2017 10:30 pm GMT
London (Kasmo), Dalalka Qadar iyo Talyaaniga ayaa maanta oo 2da Agosto ah waxaa dhexmaray heshiis military oo ku saaban iskaashi dhanka difaaca ah, waxaana Dooxa ku saxiixay Wasiirrada Arrimaha Dibadda 2da dal.
Maxammed Cabdulraxman Al-Thani iyo Angelino Alfano ayaa shir jaraa’id oo wadajir ah ku sheegay in Qadar ka iibsan doonto Talyaaniga 7 markab oo nooca fudud ah oo ay ku baxayso lacag gaaraysa 5 Bilyan oo Euro.
Saxiixa heshiiska difaaca ayaa qayb ka ah heshiis is-afgarad (Memorandum) oo Wasiirrada Gaashaandhigga 2da dal, Khalid Bin Mohammad al Attiyah iyo Roberta Pinotti, (Sawirka hoose), horey ugu kala saxiixdeen Rome 16kii Juun 2016kii.
Wasiirrada Arrimaha Dibaddu waxay isla soo qaadeen qalalaasaha Gacanka, iyada oo Tvga Al-Jazeera wariyay in Al-Thani hoosta ka xarriiqay in go’doomintii Qadar la saaray tahay mid an sabab macquul ah oo siyaadadeed ku fadhiyin.
Intii kulanka 2da dhinac lagu jiray waxaa la isla soo qaaday baahida loo qabo sidii shuruucda caalamiga ah loo xurmayn lahaa iyo ahmiyadda wadahadal wax ku-ool ah oo dhexmara labada dhan.
Mowqifka Talyaaniga ee ku aaddan qalalaasaha Gacanka ayaa dhexdhexaad ah kuna fadhiya wadahadal iyo sidii xal dibolomaasi loogu raadin lahaa arrinta.
Booqashada Wasiir Alfano ayaa ku soo beegmaysa 1 bil ka dib middii Wasiirka dhiggiisa ah ee Qadar ku tagay Rome, 1dii July ee sannadkaan.